To Ungazikhusela njani iiapps zakho ngegama eligqithisiweyo-Ezona ndlela zisebenzayo | Izikhokelo ze-Android
Ungayibeka njani ipassword kwizicelo zakho ze-Android
UManuel Ramirez | 15/11/2019 11:26 | Ukuhlaziywa ukuba 16/03/2020 13:37 | Izifundo ze-Android
Ukubeka iphasiwedi kwizicelo zakho kuphantse kube yimfuneko Ukoyisa uninzi. Yonke into kungenxa yokuba ii-mobiles zethu, ngaxa lithile, zinokusetyenziswa yenye. Kwaye baninzi banomdla kakhulu, kungcono kunokuba ubeke ipassword kule app ngolwazi olunobuthathaka ukubathintela ekujongeni ukuba inokubabetha apho.
Singabhloka ukufikelela kwiiapps NjengoWhatsApp apho sinazo zonke izingxoxo zethu okanye ezinye iinkqubo zokusebenza apho sinolwazi olubuthathaka, njengeDropbox okanye usetyenziso olufanayo lwamanqaku apho sinezitshixo ezahlukeneyo. Ngethamsanqa, kwi-Android sinezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kunye nezinye iindlela zokuqinisekisa ukuba akukho mntu ujonga izinto zethu.
Indlela yokutshixa WhatsApp kunye negama lokugqitha
1 Ungazikhusela njani iiapps zakho ngamagama okugqitha
2 I-Samsung Galaxy kunye neFolder ekhuselekileyo
3 Indawo yabucala yeHuawei
4 Ezinye iindlela zeHuawei kunye ne-Samsung kwezinye iimveliso
5 Eyonaapps ilungileyo yokukhusela ngegama eligqithisiweyo
5.1 I-Norton App Lock
5.2 Tshixa i-App Lock
5.3 Tshixa i-Applock Lock
6 I-WhatsApp enokuvula iminwe yeminwe
Ungazikhusela njani iiapps zakho ngamagama okugqitha
Iphasiwedi bobona bumdaka busezantsi kwezokhuseleko kwifowuni ye-Android. Nangona ekugqibeleni, ukuba sisebenzisa igama eligqithisiweyo elomeleleyo, linokukhuseleka ngakumbi kunezo zixhobo zineenzwa zeminwe; ngakumbi ezo zivamvo ezingenayo i-ultrasonic esekwe ekuthatheni ifoto yeminwe yakho kwaye uyithelekise ngalo lonke ixesha uyisebenzisa ukuvula iselfowuni okanye enye yezicelo zakho.
Ke ngoko, sihlala sicebisa Sebenzisa ipassword enobunzima. Kwaye xa kunokwenzeka, beka umqondiso njengonobumba osezantsi okanye unobumba omkhulu kunezinye. Ngale ndlela sihlala siqinisekisa ukuba kunzima ngakumbi "ukuqikelela" kwaye inkqubo iyayivula ngokuzama amawaka endibaniselwano.
Kwakhona, ukuba ungathumela kwezinye izinto zokhuselo, ezinje ngeminwe yeminwe okanye inzwa yobuso, soloko unephasiwedi njengesiseko. Ukuba kulula kakhulu ukuvula ifowuni ngomnwe wethu, kodwa mhlawumbi ngenxa yokukhawuleza, kwaye uhlala usebenzisa le ndlela, ipassword, kwaye iya kuhlala ikhona njengendlela yokuvula iselfowuni okanye usetyenziso, uhlala ufuna igama eligqithisiweyo.
I-Samsung Galaxy kunye neFolder ekhuselekileyo
bonke I-Galaxy Note kunye ne-S kule minyaka mithathu idlulileyo ineFolda ekhuselekileyo. Enye yezona zinto zibalaseleyo kwezi fowuni kwisoftware njengoko ikuvumela ukuba ube "nobuso" kwifowuni yakho ephathekayo obonakalayo kuwo wonke umntu okwelinye icala, ngelixa kwiFolda ekhuselekileyo unokuba neefayile, iiapps okanye imidlalo.
Ifolda ekhuselekileyo yi indawo yabucala kunye ebhaliweyo yefowuni ye-Samsung Galaxy kwaye esekwe kwinqanaba lokhuselo le-Samsung Knox. Oko kukuthi, zonke iifayile kunye nezicelo ozigqithisela kwifolda ekhuselekileyo zigcinwa ngokukhuselekileyo nangokuhlukileyo kwiselfowuni yakho. Ingathi sinenye inkqubo yokusebenza ngaphakathi kwenye.
Ngokuzenzekelayo, iFolder ekhuselekileyo ihlala isinyanzela ukuba sisebenzise iphasiwedi okanye ipateni. Kule meko sihlala sicebisa igama lokugqithisa njengoko lisitsho, kwaye njengoko besitshilo, ukhuseleko ngakumbi.
Ukusuka kuseto kwiGalaxy Note 10 ngokwayo, sinako bhala ifolda ekhuselekileyo kwiinjini yokukhangela kwaye ukhetho lokuyiqala luya kubonakala.
Iya kusicela indlela yokuyikhusela kwaye sikhethe iphasiwedi.
Sichaza enye kwaye ukuba sifuna, singasebenzisa iminwe okanye iskena sobuso.
Kule meko siya kuhlala sihamba ngonyawo; ngakumbi i-Galaxy Note 10, kuba yi-ultrasound.
Sele sinokumisela ngaphakathi kuFolda oKhuselekileyo ukuba ngalo lonke ixesha iscreen sicima kufuneka sisebenzise iphasiwedi kwakhona, okanye, umzekelo, emva kwemizuzu eyi-X isiFolda esiKhuselekileyo sitshixiwe kwakhona kwaye usibuze iphasiwedi kwakhona.
Sele singaphakathi kwiFolder ekhuselekileyo esinakho yongeza zonke izicelo esizifunayo kwaye siyifakile kwinkqubo, ngaphandle kwento yokuba ungafaka ezintsha kule ndawo xa ungena kuGoogle Play; nangona kuya kufuneka uphinde usebenzise iakhawunti yakho kaGoogle okanye eyakho kwifolda kwaye ke ngoko wahlule iiapps, iifayile, amaxwebhu nayo yonke into onayo kwesi sithuba sabucala.
Indawo yabucala yeHuawei
Isebenza ngendlela efanayo neFolder ekhuselekileyo ye-Samsung Galaxy kwaye ungayifumana kule ndlela:
Useto> Ukhuseleko neMfihlo> Indawo yabucala
Nje ukuba sisebenze, kuya kufuneka setha iphasiwedi eyomeleleyo kwaye ukuba sifuna, dibanisa kwakhona iminwe. Ngoku sinokuqala umsebenzisi kwiNdawo yabucala ngokungathi sineselfowuni eyahlukileyo, kwaye njengenye indlela ye-Samsung.
Ngale ndlela unokukhusela ii -apps ozifunayo kwaye ube nocwangco lwabucala kuloo ndawo yabucala, ngelixa "ibonakala" unokuba nobuchwephesha okanye ngokuchaseneyo. Imodus operandis iyafana neyeSamsung, ke ukuba uyazi enye okanye enye, uya kuzifumana usekhaya.
Inyaniso yile Inkqubo elungileyo kakhulu nekhuselekileyo yokukhusela zonke ezoapps Ngegama eligqithisiweyo kwaye ke ukuthintela oontanga ukuba bajonge izingxoxo zakho, iifoto, iividiyo okanye amaxwebhu abuthathaka anolo lwazi esifuna ukuba kungabikho mntu ukubamba.
Ezinye iindlela zeHuawei kunye ne-Samsung kwezinye iimveliso
En UXiaomi sinokukhetha ukukhusela ii -apps ngegama eligqithisiweyo:
Makhe siye Imfihlo> Izinketho zabucala kwaye sisebenzisa iiBlock izicelo ezizodwa.
Kuya kufuneka sikhethe kuphela bonke abo sifuna ukubakhusela kwaye ngaloo ndlela sigcine sikhuselekile emehlweni abanye.
Con I-OnePlus sikwimeko efanayo kwaye iyafana kwenye into uXiaomi anayo:
Ngokuthe ngqo siya kuseto lweNkqubo> Ukhuseleko kunye noFingerprint> Vala iZicelo> Khetha zonke iiapps esifuna ukuzibhloka.
Ayikho enye imfihlelo kunaleKe ukuba unefowuni evela kwezi brand, musa ukulibazisa ukusebenzisa into eya kuvumela abantwana bakho ukuba bathathe iselfowuni yakho ngaphandle kokufumana iifoto esingafuni ukuba bazibone okanye bafikelele kulwazi oluhlala luyimfihlo emehlweni abo.
Eyonaapps ilungileyo yokukhusela ngegama eligqithisiweyo
Emva koko siza kukubonisa Olunye losetyenziso olungcono lokukhusela iiapps zakho ngegama eligqithisiweyo. Ukuba awunazo ezinye zeefowuni zohlobo lweSamsung kunye neHuawei, eziapps ubuncinci zinokunika inxenye yamava okhuseleko lwegama eligqithisiweyo.
I-Norton App Lock
Kuxhaswe yintsholongwane yayo, Norton App Tshixa ikuvumela ukuba usete i-PIN, iphasiwedi okanye ipateni. Unokuthintela enye okanye ezininzi ii -apps ngegama elinegama elifanayo kwaye ukhethe ukuba zeziphi oza kuzikhusela. Ngamanye amagama, sinokuzikhusela zonke okanye enye ngokukodwa.
Kwakhona Inenzwa yeminwe yeminwe ukuyisebenzisa ngokudibeneyo negama eligqithisiweyo. Kwaye ngokwayo isisicelo esinexabiso elikhulu njengoko simahla. Enye indlela enomdla kwaye ekubeni uvela eNorton sinokuyithemba kakuhle.
Tshixa i-App Lock
Ukutshixa kusivumela ukuba sitshixe iiapps zethu ngegama eligqithisiweyo. Kwaye iyakuvumela ukuba yenziwe nangolunye usetyenziso njengegalari ukuze imifanekiso ekhethiweyo kwigalari inyamalale. Ngamanye amagama, sithetha ngokuba "nedrowa evaliweyo" yeefoto kunye nevidiyo.
NjengeFolder ekhuselekileyo yeSamsung, nawe unayo ukhetho lokusebenzisa ukutshixa okuzenzekelayo emva kwexesha elithile okanye kwindawo. Kwaye akulunganga ukuba ungafihla i-AppLock kwaye ukuze umntu osebenza naye onomdla angazi nokuba une-app yale ndlela; Lumka ukuba bakulungele kakhulu.
Omnye usetyenziso olugqibeleleyo kwaye ibikunye nathi ixesha elide kwi-Android.
Tshixa i-Applock Lock
Lolu hlelo lokusebenza lubonakala Ubamba iliso lomsebenzisi ngakumbi kwaye ivelise amava angengawo eluhlaza njengangaphambili. Ngaphandle kokuthintela ii -apps ngegama elinegama eligqithisiweyo, ikwavumela ukuba wenze okufanayo neefoto, iividiyo kunye nenye idatha yabucala.
Yiyo usetyenziso lwasimahla kwaye uthanda ezimbini ezidlulileyo inamakhulu amawaka okhuphelo ngenqanaba lokwoneliseka lilonke ngaphezulu kokuphakamileyo. Enye into eyahlukileyo eyahlukileyo, ubuncinci ngokubonakalayo, kwaye inokukholisa abanye abafuna amava akutshanje kunye neMinimalist yamaYilo (ulwimi loyilo oludityaniswe noGoogle kwi-Android ukusukela kwinguqulelo 5.0)
Umthuthukisi: I-DoMobile Lab
I-WhatsApp enokuvula iminwe yeminwe
Gqibela Sikushiya nenqaku elitsha elifanelekileyo ukuvulela enye yeapps apho sinokuthi sibe nazo ezo zingxoxo esingafuni mntu azibone, kwaye zezobomi bethu bobuqu.
Kutshanje I-WhatsApp ivumela ukuvulwa kwensiza kusetyenziswa isivamvo somnwe. Okwangoku ayikuvumeli ngegama eligqithisiweyo, kodwa kuyinyani ukuba ngenzwa yoluhlu lokhuseleko olungonzakalisi kwaphela.
Olu khetho lunokufumaneka Ukusuka kuseto> Ubungasese> Isitshixo somnwe. Nje ukuba isebenze, kuya kufuneka usebenzise iminwe yakho ukuvula i-WhatsApp. Oku kuthetha ukuba neefowuni zomsindo zikhuselwe ngeminwe.
IikhonkwaneIindlela ezizezinye zokukhusela iiapps zethu ngegama eligqithisiweyo kwaye ke sikuphephe ukujonga izizathu, izizathu okanye sishiyeke nobomvu kakhulu xa umntu efumanisa into esingayifuniyo. Ayisiyiyo le nto kuphela, kodwa ngenxa yokuba ubomi bethu bobuqu buqu kwaye akukho mntu kufuneka angene kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Izifundo ze-Android » Ungayibeka njani ipassword kwizicelo zakho ze-Android
Miracast: yintoni kunye nendlela esebenza ngayo